Azonao atao izao ny mifehy ny Spotify amin'ny solo-sainao amin'ny iPhone sy iPad | Vaovao IPhone
Spotify dia nanokatra safidy iray efa ela izay efa nipetraka tamin'ny rindranasa iOS sy Android, saingy tsy mbola azo ampiasaina. Manomboka anio dia azo atao ny cfehezo ny famerenana mozika amin'ny alàlan'ny Spotify amin'ny solosainao avy amin'ny iPhone, iPad na fitaovana Android. Safidio ny mozika, fehezo ny fandrosoana sy ny fihodinanan'ny hira, atsangano na ampidino ny horonam-peo ... azo atao izany amin'ny fampiharana Spotify ho an'ny iOS sy Android. Safidy izay tsy isalasalana fa manatsara be ny serivisy amin'ny alàlan'ny fanolorana fahafaha-mifehy mozika mora foana na aiza na aiza ao an-tranonao. Lazainay anao ny antsipiriany etsy ambany.
Tsy misy tokony hamboarina, mila antoka fotsiny fa manana ny kinova farany an'ny apetraka Spotify napetraka ao amin'ny fitaovanao ianao, na solosaina Mac na Windows, Android na iOS fitaovana, ary ireo fitaovana rehetra mifandray amin'ny tambajotra WiFi iray ihany. Raha mahafeno ireo fepetra takiana ireo ianao dia sokafy ny rindranasa Spotify amin'ny solosainanao sy ny fitaovana findainao ary avy eo amin'ity farany ity dia fidio ny efijery playback. Eo ankavanan'ny Play dia hahita mpandahateny misy boribory manodidina anao ianao, kitiho ary afaka misafidy izay fitaovana hanombohana ny playback ianao. Safidio ny solosainao ary hanomboka hitendry mozika izy io.
Raha miverina amin'ny efijery playback an'ny findainao ianao dia azonao atao ny mifehy ny playback toa ny solosainao. Miverena na mandroso, fehezo ny volanao sns. Fanaraha-maso lavitra tsara izay hamela anao hilalao mozika amin'ny fomba milamina avy amin'ny solosainao. Tadidio ihany koa fa raha manana Mac ianao dia afaka mandefa ny mozika amin'ny mpandahateny rehetra mifanaraka amin'ny AirPlay, ary fehezinao amin'ny iPhone sy iPad anao. Izany dia, araka ny azonao an-tsaina, serivisy ho an'ny mpampiasa Premium Spotify manokana, ary tsy fantatray raha mikasa ny hanitatra izany amin'ireo mpampiasa kaonty maimaimpoana ny serivisy mivantana, na dia tsy toa izany aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Azonao atao izao ny mifehy ny Spotify amin'ny solosainao amin'ny iPhone sy iPad
Vainglory ho an'ny iPhone dia ho hita amin'ny herinandro ambony, efa nosedraina izahay
TetherMe dia mifanaraka amin'ny iOS 8 izao